भारतीय टिभी सिरियलकी चर्चित नायिका जसले गरिन् यस्तो फिल्ममा काम ! – " सुलभ खबर "
भारतीय टिभी सिरियलकी चर्चित नायिका जसले गरिन् यस्तो फिल्ममा काम !
एजेन्सी – भारतिय चर्चित टेलिसिरियल उतरनमा भिलेनको भुमिकामा देखा पर्ने चर्चित नायिका हुन् रश्मि देसाई । उनि प्राय सिरियलमा भिलेनका भुमिकामा देखा परेकी हुन्छिन् ।
उनको त्यो अभिनयलाई अत्याधिक रुचाइएको छ । रश्मि देसाईले सिरियलबाटनै धेरै फ्यान कमाएकी छिन् । धेरै सिरियलमा अभिनय गरेकी उनि सिरियलमा मात्र नभई सामाजिक संजालमा पनि उतिकै सक्रिय रहेकी छिन् । उनले बेलाबेलनमा आफ्ना हट तस्विर सामाजिक संजालमा शेयर गरेकी हुन्छिन् ।
रश्मि देसाई उतरनमा बाहेक हरु सिरियलमा पनि अभिनय गरीसकेकी छिन् । हरेक सिरियलमा भिलेनको रुपमा देखिने वास्तविक जीवनमा भने उतिकै नरम स्वभावकी र उतिकै सुन्दर रहेकी छिन् । रश्मि देसाईले आफ्नो देब्रे खुट्टामा कमलको फुलको ट्याटु बनाएकी छिन्। जुन ट्याटु प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यी अभिनेत्रीले भोजपुरी फिल्म गरेकी थिइन्। साथै उनले पनि केहि निकै घटिया बि ग्रेड फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन्।
यो पनि सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले हसाएर ठहरै पारे, ‘भिडियो सहित्’